China Zvigadzirwa fekitori, Zvigadzirwa mutengesi
HDPE mhango rusvingo ichitenderera mutopota
Aluminum chiwanikwa Lined Plasti ...
Pe mvura yekupa pombi HDPE coil
Huru kuomarara kwemhete: iyo pombi madziro yakagadzirirwa neyakajeka mhango mhete chimiro, iyo inovandudza zvakanyanya kuomarara kwemhete kwepombi. Panyaya yechinhu chimwe chete icho, inogona kutakura kumanikidza kukuru kwenzvimbo.
Iyo yemukati drainage system ine pachena zvirinani kuenzanisa neyechinyakare giravhiti yazvino drainage system.
Yakakura Dhayamita OD1800mm HDPE Pipe yeMvura Inopa
Iyo HDPE zvinhu haina-chepfu uye isina kunaka. Izvo ndezvezvivakwa zvegirinhi uye hazvina kana kuyera kuburikidza neyakaomarara hutano bvunzo, iyo inogona kunyatso kuvandudza mhando yemvura.
Kubva zvaishandiswa mukushandisa mvura yekunwa muma1970, mapaipi epamusoro-soro e polyethylene (HDPE) ave chinhu chakanakira mapombi anoshandiswa kutakura mvura yekunwa. Sechinhu chakaomarara uye chinogadzikana chinogona kutora makore zana kana kupfuura nekuchengetedzwa kushoma, pombi yeHDPE yakaratidza kuve yepamusoro kune zvimwe zvinhu zvakawanda zvepombi uye inogona kushandiswa senzira yekugovera nekugovera mvura yekunwa. Hupenyu hwakareba hwekushandira uye mutengo wakaderera wekuchengetedza wepombi dzeHDPE, pamwe nehunyanzvi hwayo uye matekinoroji akasiyana siyana ane magero madiki, zvinotungamira pakuiswa kwepombi dzeHDPE nemutengo wepasi pehupenyu wechero ipi yekunwa mvura yepombi.
Yakakura Dhayamita OD1600mm HDPE Yemvura Pipe Yekushandisa kweMaspala
iye HDPE zvinhu hazvina chepfu uye zvisina kunaka. Izvo ndezvezvivakwa zvegirinhi uye hazvina kana kuyera kuburikidza neyakaomarara hutano bvunzo, iyo inogona kunyatso kuvandudza mhando yemvura.
Pe pombi inoshandiswa zvakanyanya mumunda wetsvina, mvura, kudhiraina uye kutakura kwemvura hunhu kune simba rayo rakakwira, kupisa kwakawanda kupisa, ngura kuramba, isina-chepfu uye kusapfeka-kusagadzikana.
Chigadzirwa alias: aruminiyamu chiwanikwa lining epurasitiki mutopota, epurasitiki lining aruminiyamu chiwanikwa pombi
Executive mureza: CJ / T 321-2010
Chigadzirwa magadzirirwo: dn20-dn160
Chigadzirwa chechigadzirwa: Chikamu 1
Chigadzirwa chinoshandiswa: kuwanikwa kwemvura, kudziyisa
Pamusoro kurapwa: anodic oxidation
Ruzivo rwekufungidzira: 1.5 kg / m
Referensi yekupenya kureba kwealuminium alloy yekunze chubhu:
Zita rekunze dhayamita (mm) 20/25/32/40/50/63/75/90/110/160
Kureba kwePeel (mm) 13/15/17/19/20/25/28/32/38/55
Yakakura-dhayamita HDPE epurasitiki simbi ichitenderera pombi
Chigadzirwa magadzirirwo: dn1000mm
Chigadzirwa chechigadzirwa: nhema
Product zvinhu: HDPE polyethylene
Pipe kureba: kazhinji 9m, tsigira maitiro
Chigadzirwa chinoshandiswa: tsvina pombi
Yakareba hupenyu-hurefu. Yakagadzirirwa makore makumi mashanu ehupenyu hwehupenyu pasi peyero tembiricha uye kumanikidzwa.
DN200hdpe gasi pombi
Kirasi kupatsanura: pe80 / 100 giredhi
Chezita kumanikidzwa: 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.0MPa
Kukora kwemadziro: 11.4 / 18.2mm
Mutsara wekumaka mutsara: PE80-yeroPE100-orenji
Nzvimbo yeKutanga: Xuzhou, Jiangsu
Mugadziri: Jiangsu Runshuo Pipe Viwanda Co, Ltd.
Chero papi pavhu kana mvura, HDPE yekucheresa Pipe yakazara yeinjiniya mutengo wakaderera uye unoshanda kupfuura mamwe mapaipi.
Ngura kuramba. Pipe ine yakanakisa acid uye alkali kuramba, ngura kuramba, yakakodzera kemikari indasitiri.